Ubre - Ala na-arụ ọrụ Ọkachamara - Geofumadas
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ịchọpụta ihe dịpụrụ adịpụ, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi ozi mpaghara na usoro ndị ọzọ nke nnweta, nyocha na ị nweta nsonaazụ maka ọzụzụ ndị ọzọ.
Mepụta ikike maka inweta, nyocha na ndokwa nke gbasara ohere gbasara ohere. Usoro a gụnyere mmụta nke HEC-RAS, otu n'ime mmemme a kacha eji eme ihe na nyocha mmiri; yana iji ngwaọrụ eji eme ihe data CAD / GIS na ọzụzụ ndị ọzọ dịka Google Earth na AutoDesk Recap. Tụkwasị na nke a, ọ gụnyere usoro ihe eji eme ihe / echiche maka ịghọta usoro njikwa ozi niile sitere na ihe ntanetị.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaDiploma Land na-arụ ọrụ Ọkachamara»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke diplọma - ọkachamara ọrụ ala
Ihe mmetụta dị anya ……………………… .. .. USD 130.00 24.99
Google Earth ……………………………………… 130.00 24.99
Nnyocha mmiri mmiri HEC-RAS 1 ……… USD 130.00 24.99
Idozigharị ihe nlele ……………………………. USD 130.00 24.99
Nyocha mmiri mmiri HEC-RAS 2 ………. USD 130.00 24.99
Blender - Nlereanya obodo… ..USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Diploma - Ọkachamara Geospatial
Next Post Geomoments - Uche na Ọnọdụ na otu ngwaNext »